Toa Tsy Ho Voasoroka Ny Loza Mitatao Entin’ny Viriosy Zika Ao Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2016 2:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, čeština , Català, русский, नेपाली, English
“Fahafatesana noho ny Chikungunya #Trinidad” mety hovàna anarana ho “Fahafatesana noho ny Zika”. Sary an'i Georgia Popplewell, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-SA 2.0.
Miteraka sahotaka ihany ao Karaiba ny viriosy Zika taorian'ny nahamarhan'ireo Breziliana manampahefana momba ny fahasalamana ireo tranga midangana be tsy mahazatra tamin'ny aretina microcephaly tany amin'ireo faritra be moka ao amin'ny firenena. Fikorontanan'ny fivoaran'ny atidoha sy ny faritry ny loha ny Microcephaly, izay mahatonga ny haben'ny lohan'ireo zaza menavava ho kely kokoa noho ny mahazatra. Hatreo dia nampifandraisin'i Brezila ny viriosy Zika entin'ny moka sy ny fahavoazana hatrany am-bohoka amin'ny atidohan'ireo zaza — ary ireo mpitsabo any dia manoso-kevitra hoe mety mbola misy fiantraikany goavana lavitra eo amin'ny fivoaran'ny zaza ao am-bohoka aza ilay viriosy”. Tsy atao mahagaga, niparitaka hatrany ivelan'i Amerika Atsimo ilay viriosy.
Ao Trinidad sy Tobago, izay farany atsimo indrndra amin'ireo vondronosy ao Karaiba, nambara ho hamehana eo amin'ny resaka fahasalamàna ao amin'ny firenena ilay viriosy.
Ambaran'ny Trinidad ho hamehana ara-pahasalamna ny viriosy Zika : Ambaran'ny The post Trinidad fa mampanahy ny fahasalamana
Tahaka ny any amin'ireo faritra hafa izay tandindonin'ilay viriosy, toroana hevitra tsy hitondra vohoka aloha ny vehivavy, saingy tsy aroloza mahomby ho fisorohana hatrany anefa io any amin'ny faritra iray izay voafetra ihany ny fahafahan'ny vehivavy mahazo fomba fanabeazana aizana, na tsy dia laharam-pahamehana loatra ho an'ireo kely fidirambola, ary toerana izay ny finoana ara-pivavahana no mbola mitàna toerana lehibe manoloana ny fanapahankevitra handrindra fiterahana amin'ny fomba voatrolombelona.
Na izany aza, toy ny naka fomba fiady mavitrika hiatrehana ilay olana i Trinidad sy Tobago. Napetraka manerana ny repoblikan'ilay nosy kambana ireo Rapid Response Units (RRUs) – tarika mpandray an-tànana malaky – mba hiatrika ny fielezan'ny moka Aedes Aegypti, izay manaparitaka ilay aretina. Hampitomboina ihany koa ny fanemporana setroka sy fandrarahana any amin'ireo faritra fonenan'ireo vondrom-piarahamonina, izay tsy niparitaka araka izay nilaina hanilihana ny andianà moka. Nanome toromarika ny ministeran'ny fahasalamàna ao amin'ilay firenena hoe mandritry ny fotoanan'ny Fetibe, ireo toerana lehibe rehetra dia horarahàna fanafody avokoa, na dia natsahany fotoana fohy aza ny fitsirihana ireo vahiny sao mitondra ny otrikaretina eny am-pidirana ny seranana, tamin'ny filazana fa sosokevitra tsy afaka tanterahana izy io. Ho solony, nandrisika ny olona izy handray fepetra tsy ho voakaikitry ny moka sy mba tsy ho toerana fanatodizan'ny moka ny trano fonenany.
Mandritra izany, nambaran'ny Fikambanana Erantany misahana ny Fahazalamana (OMS) fa hamehana ho an'ny fahasalamàma manerana izao tontolo izao ny viriosy Zika :
Hamehana ho an'ny OMS ny aretina mifamatotra amin'ny Zika
Ao amin'ny biloagy Barbados Underground, Kammie Holder nanoratra lahatsoratra iray nitarainany ny amin'ny “hakamoana” nentin'ireo manampahefana misahana ny fahasalamana ao amin'ny firenena niatrehana ny loza mitatao ateraky ny Zika:
Eto amintsika ny Zika, miaraka amin'ny famoahan'ny US CDC [Ivontoerana ho Fanarahamaso ny Aretina sy ho Fisorohana] torohay mandràra ny fivezivezena any amin'ireo firenena nahitàna trangan'aretina. Indrisy, maro no tsy mitatitra hoe miteraka halemena ho an'ny olondehibe ihany koa ity aretina ity. Antenaina fa indray andro any, ireo kamo mandray fanapahankevitra dia hianatra ny lanjan'ny fomba fijery mavitrika. Heveriko fa hiandry ny fahatongavan'ny fiaramanidina foana tsy misy olona ry zareo vao hanomboka hiasa.
Amin'izao fotoana izao dia manao fanadihadiana ireo mpahay siansa raha toa ny viriosy Zika ka mifandrohy ihany koa amin'ny aretin'ny hozatra Guillain-Barré, izay mety hiteraka fahalemena.
Lavidavitra kokoa any avaratr'ilay vondronosy, Babette, bilaogera iray mipetraka ao amin'ny Repoblika Dominikàna no nahatsiaro ny fiantraikany mahaverivery saina nateraky ny viriosin'ny Chikungunya nafindran'ny moka taminy :
Tsy dia tena tsara loatra aho hatramin'ny nahavoazan'ny chikungunya ahy.
Efa ho roa taona izany amin'izao fotoana izao […] tsy tena afaka amiko ny fanaintainan'ny vanin-taolako, tahaka izay efa novinavinain'ny sasany fa mety hitranga.
Miato manoloana ny karakara vy amin'ny rihana ambanin'ny trano fonenako i Dona Gloria, mpifanila vodirindrina amiko, zokiko 25 taona, rehefa handeha hiantsena ary manotra ny hato-tànananay eo izahay sy mitaraina momba ny hato-tongotray.
Momba ny loza mitataon'ny Zika, nanoratra izy :
Ankehitriny misy viriosy iray hafa indray miàla any. Iray izay mamely ny zaza vao teraka [sic]. Antsoina hoe Zika. Mahatonga ny lohan-dry zareo ho kely bitika. Nilazàna ny vehivavy sy ny tovovavy mba tsy hitondra vohoka.
Saingy raràn'ny fiangonana katolika, izay eo ambany fitantànan'i Papa Nuncio, ny fampiasàna fiarovana (eny, mihevitra ve ianareo fa mampiasa an'ireny ry zareo? hoe mandany vola amin'izay fingotra any ry zareo ‘macho'? fa hoe mandro mitafy lamba tsy lena ry zareo? avadibadiho ny saina)
ary voaràra ny fanalànjaza […]
Nitarika firenena maro hamoaka torohay momba ny fivezivezena, izay mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fizahantany any Karaiba, ireo tahotra nentin'ny fiparitahan'ilay aretina sy ny loza mitatao aterany ho an'ny ankizy kely dieny mbola any am-bohoka, dia ny fizahantany izay tena andrin'ny toekaren'ireo faritra maro ao aminy. Tsy mbola misy ankehitriny ny fitsaboana na fanefitra azo raisina hanoherana ilay viriosy.